HomeChampions LeagueDiego Simeone Oo La Ganaaxay & Real iyo Atletico Oo Iyana Ciqaab Mutaystay
Khabiirkan reer Argentina ayaa laba jeer garoonka ciyaartu ka socotay soo cadho gallay oo xaalad dagaal meesha ka abuuray, Laakiin gar-soorihii ciyaarta ee Bjorn Kuipers, ayaa kaadh-ka cas kaga saaray garoonka tababare Simeone.
Xidiga khadka dhexe ee naadiga Real, Xabi Alonso, oo isaga laftiisa habeenkaas kaadhka cas la siiyey, ayaa ku jira dadka UEFA falkan u ganaaxday, kadib hab dhaqankii uu garoonka isku soo dhex tuuray markii uu dhacay siidhigii dhamaadka kulanku , isaga oo dabaal degaya.
Simeone ayaa dagaal la gallay difaaca kooxda Real, Raphael Varane, oo kubad six un ugu laagay dhinaca tababaraha Atletico , markii uu Rolando dhaliyey rigoodhihii goolka Afraad ee Real ku yimid.
Uefa waxay sidoo kale ku ganaaxday labada kooxood ee Real iyo Atletico, Ugu yaraan 5 ciyaaryahan oo labada kooxoodba kaadhka Huruuda ah ( Digniinta ah) la siiyey, waxa sidoo kale labada kooxoodba lagu ciqaabi doonaa , shididii ay taageerayaashoodu ku dhex shideen Nalka ama dabka dabaal dega ( Fireworks) garoonka dhexdiisa.
Xaaladahaas oo dhan ayaa la dacwadooda la dhagaysan doonaa 17 ka bisha July , halka Simeone iyo Alonso ay mutaysan doonaan in laga mamnuuco tartanka xili ciyaareedka dambe.
Angel di Maria: Real Madrid warqad bay ii soo direen ay leeyihiin ha ciyaarin kulanka Finalka Koobla Aduunka
15/04/2016 Abdiwahab Ahmed
Sergio Aguero Dheeman ay wali ku raad joogaan Barcelona iyo Real Madrid… Markii Uu Cadeeyey Inaanu ka Liidan Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo